MSF oo soo gabagabeysay taageeradii ay siin jirtay isbitaalka Istarliin ee Guricel - MSF Gudaha Soomaaliya- Helitaanka daryeel Caafimaad
06.11.2012 | Gobolka Galgaduud, Koonfura iyo bartamaha Soomaaliya, Taakulada Soomaalida
Neyroobi, 6da November, 2012—– Ka dib sanada badan oo tageera caafimaad ay ka bixin jirtay isbitaalka Istarlin ee Guricel, gobolka Galgaduud, MSF waxay soo gabagabeyn doontaa taageeradii isugu jirtay dhaqaala, xirfad iyo isxilqaan marka la gaara 31da bisha jannaayo sanadka 2013ka.
“Isbitaalkan waxaa sameeyay bulshada ka hor xitaa inta ay MSF bilaabin taageeraddiisa, mar walbana bulshada waxay ku lug lahayd maamuliddiisa. Waxaan la shaqeynay in ka badan 6 sana, waxaana rajeyneynaa in xarunta ay sii wadi doonto bixinta adeegga caafimad ee sida weyn loogu baahanyahay.” Ayuu yiri Brice De Le Vigne, Agaasimaha Howlaha MSF ee Somalia.
MSF waxay markii ugu horeysay ka howlgashay isbitaalka Istarliin 2006dii, iyadoo ujeedku ahaa in ay adeeg caafimaad oo bilaash ah ka bixiso dhamaan laamaha isbitaalka. Hay’adda waxay sidoo kale maalgelin ku sameysay tababaridda shaqaalaha caafimaadka iyo bixinta latalin caafimaad iyadoo telemedicine ay isticmaalayaan khubara ku sugan Neyroobi mar walba oo loo baahda inay bixiyaan latalin caafimaad oo xasaasi ah iyo in ay hagaan shaqaalaha Soomaalida ah.
Sanadkan 2012da, in ka badan 29,294 bukaan ayaa helay latalin caafimaad, iyadoo ay ka mid yihiin1,094 dhalmo iyo 537 qaliin ah oo lagu sameeyay isbitaalka.
MSF waxay si toos ah ugu shaqeyneysay Soomaaliya tan iyo sanadkii 1991, waxeyna weli taagera caafimaad oo nafaf lagu badbaadiya siisaa boqolaal Soomaali ah oo ku sugan 10 gobal ee dalka gudahiisa ah iyo sidoo kale dalalka dariska ah ee Kiinya iyo Itoobiya. In ka badan 1,400 oo shaqaala Soomaali ah oo ay taageerayaan ku dhawaad 100 kale oo ku sugan Neyroobi ayaa waxay bixiyaan adeeg caafimaad oo asaasi ah oo bilaash ah, daweynta nafaqa darada, tageera caafimaad oo ay siiyaan dadka barakaca uu saameeya, iyo qeybinta raashiin iyo biyo dhaamis ay ka sameeyaan ilaa 9 goobood oo ka tirsan Koonfurta iyo Bartamah Soomaaliya. MSF waxay si gaar ah ugu tiirsantahay deeqaha ay bixiyaan shaqsiyaad gaar ah mana qaadata lacagaha ay bixiyaan dowladaha si ay u maalgelisa mashruucyada ay ka wada Soomaaliya.